.johnmoeeain. (27 Aug 2012)
တစ်ခါတစ်ခါ ဘ၀က ရထားမဖြစ်ပဲ သံလမ်းကြီး ဖြစ်နေတယ် . . .
သိပ်ကောင်းတဲ့ အတွေး . . . ဟုတ်တယ်
တခါတခါ ကျွန်တော်တို့တွေ အနင်းခံလိုက်ရတာ . . .
နည်းနည်းလေးပိုကြိုးစားရင် စိတ်ကူးအိမ်နဲ့ နည်းနည်းပိုနီးလာမယ်..။ များများ ကြိုးစားရင် မြန်မြန် နီးလာမယ် ထင်နေခဲ့တယ်....။ သေချာတိကျမယ့် လမ်းတွေနဲ့တော့ နီးလာတယ်..။ စိတ်ကူးအိမ်ရဲ့ အဝေးမှာ အခိုင်အမာ တည်ဆောက်မိလျက်သားများ ဖြစ်နေသလားလို့